မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖျော်ဖြေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘားခရက်၊ ကျားနဂါး၊ ရှမ်းကိုးမီး၊ ရိုးလတ်၊ အံစာတုံးများတွေကို venus1688 ဆိုက်က သင့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းပေးထားတဲ့ အွန်းလိုင်းဂိမ်းဆိုက်ဖြစ်ပါသည်။
#venus1688 #ရှမ်းကိုးမီး #ဘူကြီး #ငါးပစ်ဂိမ်း #အွန်လိုင်းလောင်းကစား #အွန်လိုင်းဂိမ်း #ကာစီနိုဂိမ်း #စလော့ဂိမ်း #ဘောလုံး
Posted by venus1688 on May 04, 2021 No comments:
Venus1688 မှာ ကစားနေတဲ့ မိတ်သစ်/မိတ်ဟောင်းများ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် 1688 ယူနစ်အထူးလက်ဆောင်။
ဂိမ်းအကောင့်နှင့်လက်ဆောင်များရယူရန် Viber : 09 880199884
Posted by venus1688 on February 08, 2021 No comments:
Online Betting on Cockfights
If you breed good fighting cocks, your income will be so high that you can makealot of money from their offspring. The buyers come from all over and these fighting cocks are still being bought.
Cockfighting was one of the oldest and most popular games in the pre-Spanish Dominican Republic and everyone like those matches. Going to the cockfighting match became so important that it made new acquaintances and getting new friends. There were times when not only men and women but also children went to see cockfighting matches.
You may have seen spectators shouting at the rooster and the rooster owner to cheer with their bets.
Bets are made by looking at the color of the rooster leg. If you want to makeabet, just shout and tell. No matter how loud the encouragement, it will not affect the fighting cocks. The only thing for the audience to do is wait for the result of the battle and shout all the time of the match. The gamblers want to win the rooster they bet on.
Chicken festivals that are popular with such encouragement are legal in some places and illegal in some place. So, they came up with various ideas and plan and then they took an answer for the gambling fans. That is, you can bet online. Cockfighting that can safely bet from online at home is still popular among online gamers.
Let invite you to our online game in myanmar withafull range of games and secure deposit and withdrawal services. We havea24-hour service for all you need to know.
Posted by venus1688 on January 15, 2021 No comments:
ဘောလုံးလောင်းနည်း နဲ့ နောက်ထပ် အွန်လိုင်းမှာဘယ်လိုကစားနည်းတွေလောင်းလို့ရလဲဆိုတာ
ဒီနေ့မှာတော့ ကာစီနိုအွန်လိုင်းတွင်ဘောလုံးလောင်းနည်း အပြင် ဘက်စကက် ဘော/လက်ဝှေ့လောင်းကစားနည်း/ တင်းနစ်အစရှိတာတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.
ဘောလုံး ဝါသနာပါသော ညီ/ကို များကို စိတ်ဝင်စားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သောပရီးမီးယားလိဒ်- လာလီဂါ-စီးရီးအေ- ဘွန်ဒက်လီဂါ-ချန်ပီယံလိဒ် အစရှိသောလိဒ်ကြီးများအပြင် အခြားလိဒ်ပေါင်းစုံ မှဘောလုံးပွဲများကိုအချိန်မရွေး ကြိုက်တဲ့ပေါက်ကြေး ကြိုက်တဲ့အသင်းကိုရွေးချယ် လောင်းနိုင်ခြင်းကိုအွန်လိုင်း ဘက်တင် လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဘောလုံးလောင်းကစားသည် ဥရောပမှ Premier League, La Liga, Serie A, Champion League ….. စသည်တို့ကို အပေါ်အသင်း နှင့် အောက်အသင်းခွဲကာ ဘောလုံးပေါက်ကြေး အတိုင်း လောင်းကစားခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ အချိန်ပြည့်ဂိုးပေါင်းလောင်းခြင်း၊ ပထမပိုင်း ဂိုးပေါင်းလောင်ခြင်း၊ ကစားပွဲဂိုးပေါင်းလောင်းခြင်း၊ ဂိုးပေါင်း စုံ/မ လောင်းခြင်း၊ မီးနစ် ၉၀ ပွဲရလဒ်လောင်းခြင်း အနိုင်ရမည့်အသင်းလောင်းခြင်း ပထမဆုံးဂိုးသွင်းမည့်အသင်းလောင်းခြင်း စတာတွေနဲ့ အလောင်းအစားတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။
အွန်လိုင်းအားကစားဝက်ဆိုဒ် တွေမှာဘောလုံးပွဲအပြင် လက်ဝှေ့ပွဲတွေ၊ ဘက်စကက်ပွဲတွေ
တိုက်ပွဲတွေဟာယဉ်ကျေးမှုစတင်ကတည်းကလူတွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။ရိုးရိုးလေးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလက်ဝှေ့ထိုးပွဲတွင်ကစားသမားနှစ် ဦး၊ ၁၀-၁၂ ကြိမ်နှင့်ရလဒ် ၃ ခုသာရှိသည်၊ ကစားသမား ၁ အတွက်အနိုင်ရရှိခြင်း၊ ကစားသမား ၂ အတွက်အနိုင်ရရှိခြင်းသို့မဟုတ်သရေပွဲဖြစ်သည်။
လက်ဝှေ့ထိုးခြင်းသည်ရူပဗေဒစွမ်းအားထက်မက လျှင်မြန်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်နည်းဗျူဟာလဲပါ ၀ င်သည်။ ကစားပွဲအနိုင်ရရှိသူ၊ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုစီတွင်အနိုင်ရရှိသူ၊ အနိုင်ရရှိသူအရေအတွက်နှင့်အောင်ပွဲနည်းစနစ်များကဲ့သို့သောအလောင်းအစားအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ လက်ဝှေ့သမားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏ယခင်တိုက်ပွဲများကိုလေ့လာခြင်းအနိုင်းနိုင်မည့်ဘက်အလောင်းအစားကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဘတ်စကက်တွင်လဲ အွန်လိုင်းမှာပါ ကစားလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်စကတ်ဘောလောင်းခြင်းတွင်အောင်မြင်စွာအနိုင်ရရန်၊ လိဂ်တစ်ခုစီ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ အကျော်ကြားဆုံးများမှာများများစားစားမဟုတ်ပါ။ NBA (အမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း)၊ VTB United League (VTB ယူနိုက်တက်အဖွဲ့ချုပ်), အဆိုပါ Euroleague နှင့် Eurocup ။
ဘတ်စကတ်ဘောကစားနည်းနှင့် လောင်းပြီးငွေရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် အထိရောက်ဆုံးနည်းဗျူဟာများနဲ့ အသင်းတွေအကြောင်းလေ့လာထားသင့်သည်။
အသင်းအားကစားထက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၊ တင်းနစ်သည်ဒဏ္ဋာရီများစွာကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပရိသတ်များများစွာရှိသည်။ တင်းနစ်ကစားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းရျ်အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာသရေပွဲမရှိခြင်းကြောင့်ရလဒ် ၂ ခုသာရှိသည်။ ကစားသမား ၁ အတွက်အနိုင်ရရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကစားသမား ၂ အတွက်အနိုင်ရရှိခြင်း။
စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲနေသောရလဒ်များအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းသင်အလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိနေသေးသည်။ သင်တစ် ဦး ချင်းစီပြိုင်ပွဲ, အလုံးစုံပြိုင်ပွဲ, တစ် ဦး ချင်းစီအသီးအသီးနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအချက်ပေါ်တွင်ပင်လောင်းနိုင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ အလွယ်တကူ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပဲ ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပြီး လောင်းကြေးတွေထိုးလို့ရနေပါပြီ။
ဒီလိုကစားနည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး.... ယုံကြည်မှု စိတ်ချရမှု တို့ဖြင့်... စိတ်ကျေနပ်စွာ ကစားချင်ရင်.. ကျွန်တို့ website က ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
#ငါးပစ်ဂိမ်း #စလော့ဂိမ်း #ကာစီနိုဂိမ်း #အွန်လိုင်းဂိမ်း #ရှမ်းကိုးမီး #ဘူကြီး #ပျော်ရွင်ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်း #onlinegamemyanmar #ဘောလုံး #ဘောလုံးပေါက်ကြေး #ဘောလုံးရလဒ် #ဘောလုံးနေ့စဉ်သတင်း #venus1688
Posted by venus1688 on October 28, 2020 No comments: